NextMapping | Furayaasha-Sidaha: Habka Ugu Fiican ee loo Abuuro Mustaqbalka waa Khariidad
Sida ugu wanaagsan ee loo abuuri karo mustaqbalku waa in lagu calaamadeeyo.
Adiga iyo hoggaamiyeyaashaadu diyaar uma u tihiin inaad si firfircoon u hoggaamisaan mustaqbalka shaqada?
Shirkaddaadu miyey ku soo booddaa inay ka booddo fursadaha oo ay ku cusbooneysiiso xawaaraha isbedelka ee goobta shaqada?
Meheraddaada ma waxay khalkhal gelineysaa heerka la dejiyay mise waa carqalad?
Ma haysataa dadka saxda ah ee leh teknolojiyadda saxda ah ee goobta shaqada oo si dhakhso leh ugu gaarsiin doonta qiimo aan caadi ahayn macaamiishaada iyo kooxahaada?
Ku calaamadee mustaqbalka hal abuurnimo iyo firfircooni
Carqalado badan oo ay ka mid yihiin wareejinta dowladda, masiibooyinka adduunka, midaynta iyo helitaanka, sirdoonka macmalka ah, robotiska, iyo isbeddelada habdhaqanka shaqaalaha ayaa sababaya baahida loo qabo hogaamiyaasha inay awood u yeeshaan in ay khariidada mustaqbalka shaqadooda u yeeshaan shirkadooda iyo kooxahooda.
Nooca hogaaminta ee loo baahan yahay wakhtiyadan dhakhsaha badan ayaa ah awooda lagu laabanayo wakhtiyada socodka. Awooda, laqabsashada iyo hal-abuurka ayaa ah astaamo muhiim ah oo ka caawin doona hogaamiyaasha inay kaxeeyaan isbedelka iyo isbedelka loo baahan yahay si loo helo mustaqbalka shaqada.
Mustaqbalka erayga shaqo wuxuu siinayaa aragtiyo ku saabsan mustaqbalka shaqada iyo istiraatiijiyadaha sida firfircoon u kharibaya mustaqbalka hoggaamiye ahaan. Fikrado firfircoon iyo qaabab hal abuur leh oo gacan ka geysanaya dhisidda hoggaamiye diyaar u ah mustaqbal oo horseedi kara isbadal xagga mustaqbalka shaqada.
Indheergaradka saamaynta AI iyo robotics-ku ku leeyihiin warshadahaaga gudaha iyo guud ahaan caalamka
Moodel laba-nooc ah oo ku saabsan sida ugu fiican ee loogu faa'ideysto waxa hada ku shaqeynaya iyada oo laga helayo xog ku saabsan cilmi baarista isbeddelada mustaqbalka
Daraasadaha kiisaska ururada si guul leh u qaabeeyey mustaqbalkooda iyaga oo korka kaga jira isbeddelada iyo mustaqbalka shaqada
Sida loo xoojiyo 'dadka marka hore' mabda 'goobaha shaqooyinka mustaqbalka iyo eegista hoggaamiyeyaasha awood u yeeshay tikniyoolajiyadda si ay ugu suurtageliso qiimo aan caadi ahayn macaamiisha iyo waayo-aragnimada shaqaalaha
A 'waxa loo baahan yahay in la beddelo' iyo 'waxa aan waligood beddeli doonin' liistada hubinta si ay u kala hormariso tallaabooyinka istiraatiijiyadeed ee mustaqbalka shaqada
Dhiirrigelinta, fikradaha iyo 'khariidadda' mustaqbalka ee iskaa / kooxo / ganacsi oo isla markiiba lagu dari karo codsi wax ku ool ah
Moodalka NextMapping and iyo talaabooyinka aad mustaqbalka ugu abuuri karto is-ganacsi / ganacsi
Kama mahadcelin karo Cheryl oo ku filan dhiirrigelinteedii iyo warbixinteedii xog-warranka ahayd ee ku saabsan Soo-Jiidashada Isbadelka Soo-Jiidashada Shirweynaheena Dadweynaha JLT ee 2018. Casharkeedu runtii wuxuu si fiican ula fajacay dhagaystayaasheena degmooyinka, laakiin sidii kun sano oo hadaf ah oo la doonayo in maalin uun la sameeyo isbeddel, kalfadhi Cheryl ayaa si gaar ah aniga lafteyda si fiican u galay. Wafuuddeenna ma joojin karaan ka hadalka waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha is-dhexgalka ee ay ku soo bandhigayaan - runti waxay u adeegtay si wanaagsan sidii ay qof walba ugu xiriiri lahayd, macno ahaan!
P.Yung / Suuqgeynta iyo Isgaarsiinta